Imizekeliso 20 - Holy Bible [Xhosa Bible 1975]
Ingumgxeki iwayini, singumxokozeli isiselo esinxilisayo;Bonke abayotywe yiyo abalumkile.
Ngumgqumo onjengowengonyama entsha umothuso wokumkani;Omqumbisayo wona umphefumlo wakhe.
Kuluzuko endodeni ukuhlalela kude nengxabano; Ke zona izimathane zonke ziyavungama.
Ebusika ivila alilimi; Liyafuna ngexa lokuvuna, kungabikho nto.
Ngamanzi anzulu icebo entliziyweni yendoda, Kanti indoda enengqondo iyalirhola.
Uninzi lwesintu luyayihlangabeza indoda enenceba kulo; Ke yona indoda enyanisileyo, ngubani na ongayifumanayo?
Ohamba ngengqibelelo yakhe elilungisa, Hayi, uyolo loonyana bakhe emva kwakhe!
Ngubani na ongathi, Ndiyiqaqambisile intliziyo yam,Ndihlambulukile esonweni sam?
Amatye ngamatye, iiefa ngee-efa, Ngamasikizi kuYehova ezo nto zombini.
Nenkwenkwe iyazazisisa ngeentlondi zayo, Nokuba kuqaqambile na, nokuba kuthe tye na, ukwenza kwayo.
Indlebe evayo, neliso elibonayo, UYehova uzenzile ezo zinto zombini.
Imbi, imbi! utsho othengayo; Emke, andule aqhayise.
Kukho igolide, neekorale ezininzi; Ke yona impahla enqabileyo ngumlomo onokwazi.
Thabatha ingubo yakhe omele omnye; Menze isibambiso ngenxa yabasemzini.
Iingcinga zizinyaswa yingcebiswano; Yilwa imfazwe unecebo elilungileyo.
Otshabhisa uyise nonina, Isibane sakhe sicima ebumnyameni phakathi.
Musa ukuthi, Ndiya kubuphindezela ububi; Thembela kuYehova, wokusindisa.
Ngamasikizi kuYehova amatye ngamatye; Nesikali esikhohlisayo asilungile.
Kuvela kuYehova ukunyathela kwendoda; Umntu angathini na ukuyiqonda indlela yakhe?
Sisirhintyelo emntwini ukufumana athi, Ingcwele, Aze aqale emva kwesibhambathiso, aphicothe.
Uchithachitha abangendawo ukumkani olumkileyo, Aguqulele phezu kwabo umlenze wenqwelo.
Sisibane sikaYehova umphefumlo womntu, Siphengulula zonke iingontsi zombilini.
Inceba nenyaniso ilondoloza ukumkani; Uyixhasa itrone yakhe ngenceba.
Imivumbo etyabulayo iguxa ububi; Izibetho ziguxa iingontsi zombilini.